သကြားမစားဘဲ ရှောင်လိုက်ရုံနဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ သဘာဝအလျောက် မသေနိုင်ပါ | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
This photograph taken on December 5, 2017, shows the word 'sugar' written in grains of sugar in Paris. ( AFP / JOEL SAGET)
သကြားမစားဘဲ ရှောင်လိုက်ရုံနဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ သဘာဝအလျောက် မသေနိုင်ပါ
AFP ထိုင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ သောကြာ6မေ 2022 အချိန် 09:31
သကြားကို လုံးဝမစားဘဲ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းက ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို အလိုအလျောက် သေစေနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုထားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုကို Facebook ပေါ်မှာ အကြိမ်ရေသောင်းချီ မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး သံပုရာဖျော်ရည်သောက်တာ၊ အုန်းဆီသောက်တာတွေကလည်း ကင်ဆာကို ကုသနိုင်တယ်လို့ အဲဒီပို့စ်မှာ ဆိုထားပါတယ်။ အခုလိုပြောဆိုထားတဲ့ပို့စ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အာဖရိကနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတွေကြားမှာလည်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြောဆိုမှုအားလုံးဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ များပြားတဲ့ဆရာဝန်တွေ၊ ကင်ဆာပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေက သကြားရှောင်ကြဉ်တာ၊ သံပုရာရည်နွေးသောက်တာ၊ အုန်းဆီဇွန်းပြည့်သောက်တာတွေက ကင်ဆာကို မကုသနိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်က Facebook ပေါ်က ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အကြိမ်ရေ ၃၄,၄၀၀ ကျော် ပြန်လည်မျှဝေထားကြပါတယ်။ ဒီပို့စ်ဟာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလမှာလည်း အွန်လိုင်းပေါ် ထပ်မံပျံ့နှံ့လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရှည်ရှည်လျားလျားရေးထားပြီး “ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ပါ”လို့ အစချီထားတဲ့ အဲဒီပို့စ်ကို မြန်မာ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားပါတယ်။ ပို့စ်မှာ ရေးသားထားတဲ့စာသား တပိုင်းတစက အခုလို ဖြစ်ပါတယ်။
“ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ
ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို
ရေနွေးနဲ့ Blend လုပ်ပြီးသောက်ပါ ၁လ ကနေ သုံးလခန့် သောက်ပေးပါ Maryland College of Medicine ရဲ့ Research အရ အဲလိုသောက်ပေတဲ့းတာက ကင်ဆာဆဲလ်ကို ဓာတ်ကင်ကုသတာထက် အဆတစ်ထောင်ကောင်းတယ်
တတိယအဆင့်က အုန်းဆီစစ်စစ် သုံးဇွန်းကို မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ သောက်ပေးပါ
ကင်ဆာဆဲလ် အလိုလို ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီကုသနည်း နှစ်ခုကို သကြားလုံးဝရှောင်ပြီးတဲ့
နောက်ပိုင်းမှာ လိုက်နာနိုင်ပါတယ်” (မူရင်းအတိုင်း)
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်ရဲ့ Screenshot ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကို Facebook ပေါ်က ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
သကြားမပါတဲ့အစားအသောက်စားသုံးခြင်းက ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သဘာဝအလျောက် မသေစေနိုင်ဘူးလို့ ဆရာဝန်တော်တော်များများက AFP ကို ပြောပါတယ်။ ပုံမှန် ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေ စွမ်းအင်ရရှိဖို့လည်း သကြားဓာတ်ကို လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ Phyathai ဆေးရုံက ကင်ဆာအထူးကု ဒေါက်တာ Punlert Tanyakul က သကြားဖြတ်တောက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလက ဖုန်းကနေတဆင့် AFP ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“သကြားဓာတ်က လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့အတွက် သကြားဓာတ်ကို ဖြတ်တောက်ပစ်တာဟာ ကျိန်းသေပေါက် မကောင်းပါဘူး။ သကြားဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က မရရှိဘူးဆိုရင် ခန္ဓာဆဲလ်တွေက အသက်ရှင်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို အလုပ်လုပ်နိုင်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့ တစ်ဘက်မှာ သကြားအလွန်အကျွံစားသုံးကလည်း ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်တက်စေနိုင်တယ်” လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
This picture taken on September 23, 2019 in Vendin-lès-Béthune, north of France, shows sugar onatable. As the sugar beet harvesting season enters full swing, the Lillers plant of the world's third-biggest sugar producer Tereos isahive of activity, with trucks bearing consignments of sugar departing every hour for markets around Europe. Many are headed to Britain through the nearby port of Calais, Tereos' fifth biggest market, where it supplies sugar to United Biscuits as well as the Whitworths baking sugar brand. But that custom, which is crucial for Tereos' 14 French plants, could turn sour if, as remainsadanger, Britain leaves the EU on October 31 withoutadivorce deal, prompting the return ofahard border. ( AFP / DENIS CHARLET)
ဂလူးကို့စ်ဟာ ဆဲလ်တော်တော်များများရဲ့ အခြေခံစွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် အမျိုးသားဆေးဝါးစာကြည့်တိုက် (National Library of Medicine) က ထုတ်ဝေတဲ့ စာတမ်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“ဂလူးကို့စ်သည် ဆဲလ်အများစုအတွက် အဓိကစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး ဇီဝဓာတုတုံ့ပြန်မှုများစွာအတွက် အရေးကြီးသော အလွှာဖြစ်သည်။ ကလူးကို့စ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သာမက glucose transporters များအတွက်လည်း အရေးကြီးသည်”
ဘန်ကောက်မြို့၊ Vejthani ဆေးရုံက ဒေါက်တာ Isara Anongchanya ရေးသားတဲ့ “လူနာတို့၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝအတွက် ကင်ဆာကုသခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်သော နည်းစနစ်များ” စာတမ်းမှာလည်း သကြားဖြတ်တောက်တာကို ကင်ဆာကုသနည်းအဖြစ် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။
စာတမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ ထိရောက်တဲ့ကင်ဆာကုသနည်းတွေမှာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး၊ ဓာတုကုထုံး၊ ဟော်မုန်းကုထုံး၊ ခုခံအားကုထုံး၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဒါမှမဟုတ် ပင်မဆဲလ် အစားထိုးကုသခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံအခြေစိုက် ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cancer Research UK (ကင်ဆာသုတေသန ယူကေ) က ထုတ်ဝေတဲ့ ဒီဆောင်းပါးမှာလည်း သကြားမပါဝင်တဲ့စားသောက်မှုပုံစံဟာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေတယ်၊ ရောဂါရှာတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း အသက်ရှင်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထား မရှိဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
“သကြားက ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုးပွားစေသလား” ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်း Cancer Research အဖွဲ့ရဲ့ YouTube မှာ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“အချက်အလက်အမှန်။ သကြားစားသုံးမှု ဖြတ်တောက်ခြင်းက ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို မသေစေနိုင်ပါ” ဗီဒီယိုမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကင်ဆာသုတေသနက ရေးထားတဲ့စာတမ်းမှာ အခုလိုလည်း ရေးထားပါတယ်။
“ကင်ဆာဆဲလ်များသည် လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့် ဆတိုး ပြန့်ပွားလေ့ ရှိပြီး စွမ်းအင်အမြောက်အမြားကို သုံးစွဲပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကင်ဆာဆဲလ်များက ဂလူးကို့စ်အမြောက်အမြားကို လိုအပ်ပါသည်။ ကင်ဆာသည် အခြားသောအာဟာရများဖြစ်သည့် အမိုင်နိုအက်စစ်နှင့် အဆီများကိုလည်း လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့လိုအပ်သည်မှာ သကြားတစ်ခုတည်း မဟုတ်ချေ”
“ဤသည်မှာ သကြားက ကင်ဆာကို ပိုမိုတိုးပွားစေသည်ဆိုသော အယူအဆ၏အစဖြစ်သည်။ ကင်ဆာက ဂလူးကို့စ်ကို လိုအပ်သဖြင့် သကြားကို ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များ ကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်စေကြောင်း ယူဆကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကံမကောင်းစွာဖြင့် ဤကဲ့သို့ မရိုးရှင်းချေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာသောဆဲလ်များသည်လည်း ဂလူးကို့စ်ကို လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာသောဆဲလ်များကို ဂလူးကို့စ်ပေး၍ ကင်ဆာဆဲလ်များကို ဂလူးကို့စ်ဖြတ်တောက်ပေးရန် နည်းလမ်းမရှိပါ”
“သကြားမပါသောစားသောက်မှုပုံစံက ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိပါက အသက်ရှင်ရန်အခွင့်အရေးပိုများလာနိုင်သည် ဆိုသည့် အထောက်အထား မရှိပါ”
သံပုရာရည်သောက်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုထားတဲ့ပို့စ်တွေဟာ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့အကြောင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်မှာ AFP က အချက်အလက်စိစစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပါရီမြို့၊ စိန့်-လူးဝစ်ဆေးရုံက သွေးကင်ဆာအထူးကု ပါမောက္ခ Nicolas Boissel က “ရေနွေးသောက်ရုံ၊ သံပုရာရည်သောက်ရုံ၊ သကြားရှောင်ရုံနဲ့ ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထား မရှိသေးပါဘူး။ သံပုရာအနွယ်ဝင် (ဒီနေရာမှာ တခြားအပင်တွေလိုပဲ) တွေဟာ ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တာတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံပုရာရည်က ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆမှုတွေဖြစ်လာတာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။
ကင်ဆာဆဲလ်တွေ အလိုလိုပျောက်သွားဖို့ “အုန်းဆီစစ်စစ် သုံးဇွန်းကို မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ သောက်ပေးပါ”လို့
အုန်းဆီမှာပါဝင်တဲ့ လောရစ်ခ်အက်စစ် (lauric acid) ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ တိုးပွားမှုကို ဟန့်တားနိုင်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် အမျိုးသားဆေးဝါးစာကြည့်တိုက် (National Library of Medicine) က ထုတ်ဝေတဲ့ ဒီလေ့လာမှုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ “ လောရစ်ခ်အက်စစ်၏ အသုံးဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသော ကုသမှုဆိုင်ရာချည်းကပ်မှုများဖြင့် ထပ်မံတည်ပြုရန် နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ လိုအပ်ကြောင်း” အဲဒီလေ့လာမှုမှာ သတိပေးထားပါတယ်။
ကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန် Dr Punlert ကလည်း အုန်းဆီစစ်စစ်ကို ဇွန်းအပြည့်သောက်သုံးရင် ကင်ဆာကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့အဆိုဟာ မှားယွင်းတယ်လို့ AFP ကို ပြောဆိုထားပါတယ်။
“အဲဒီအဆိုက မှားပါတယ်။ လူခန္ဓာကိုယ်မှာ အုန်းဆီသောက်သုံးပြီး ကင်ဆာကုသတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေ ကျွန်တော်တို့ မတွေ့ဖူးပါဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီအဆိုတွေကို Africa Check ကလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှာ အချက်အလက်စိစစ်ထားပြီး ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။